Ukuhlatshwa kanye noMthetho
Ngaphambi kokuqala ukuzala onogwaja ngokuthengisa (hhayi nje kuphela ukusetshenziswa kwekhaya) kubalulekile ukuba nesiqiniseko sokuthi unemakethe yomkhiqizo wakho. Azikho izinhlangano zokubambisana eNingizimu Afrika ezingakwenza lokhu ngaphandle uma ungumlimi onenkontileka nenhlangano enkulu njengoConiglio.
Kunamadela ambalwa abhalisiwe eNingizimu Afrika kanti uma uzalanisa ukuthengisa inyama, kufanele usebenzise amadela ukuqinisekisa ukuthi "umkhuba omuhle" nokulandelela - ukwazi ukuthi umkhiqizo uvela kuphi.
Amadela amaningi ezinkukhu angasetshenziselwa ukuhlatshwa kwanogwaja, kodwa qiniseka ukuthi unawo ngaphambi kokuba uqale ukuzalanisa onogwaja.
Abalimi bayavunyelwa ukuhlaba ukuze ukusetshenziswa kwekhaya kodwa hlola imithetho kamasipala yendawo yokufaka njengoba iNingizimu Afrika inezimiso eziqinile kakhulu eziphathelene nokubulawa kwemfuyo.
Isifundazwe ngasinye nendawo yendawo inemithetho yayo, ngakho-ke kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uyazi izidingo endaweni yakho. I-NSPCA ne-SABS okwamanje imisa imithetho emihle yokuThengiswa kwezokulima ngokuphathelene nonogwaja ukuqinisekisa inhlalakahle yabo bonke onogwaja abavuniwe.
Phatha unogwaja okhethwe ukuhlatshwa ngobumnene nangenhlonipho. Isilwane esesabayo ngesikhathi sokubulala sihlaziya imisipha yayo futhi inyama iba inzima ngokungadingekile
Nakuba indlela engcono kakhulu ikusebenzisa umbulali ongathi unomusa okagesi, labo abafaneleka onogwaja abatholakali kalula endaweni yakithi futhi ngokuvamile bayabiza kakhulu ekuhlinzweni okuncane.
Indlela echazwe lapha ithatha ukuthi umuntu ohlabayo usebenzisa isandla sokudla nokuthi uboya buzogcinwa ukuze kushukwe izikhumba.
Indlela ezosetshenziswa izoqinisekisa ukuthi ikhanda lizosuswa emzimbeni futhi lizophuculwa ngokwehlukile ukuze lidliwe noma lilahlwe njengamanyikwe namathumbu esilwane.
Beka unogwaja etafuleni nekhanda layo libhekene nesokunxele sakho bese uqinisekisa ukuthi luhlala luhle futhi luqinile. Beka isandla sakho sokunxele phezu kwamehlo naso, bese usunduza isithupha sakho nenkomba yomunwe phakathi kwezindlebe ukuze uwahlukanise futhi uwacindezele.
Sebenzisa ithuluzi elincane, eliqundekile, elinamandla (isiqobolo) ngakwesokunene sakho, sebenzisa ukushaya okubuhlungu ekhanda ngemuva kwezindlebe, hhayi entanyeni. Ngale ndlela, ubuchopho obuthakathaka bulimala kakhulu futhi ukufa kufinyelela ngokushesha.
Ngemuva kokushaya, unogwaja uzodlala ngokufutheka njengengxenye yokufa kwayo. Ukuze ubhekane nalokhu kufanele ususe ngokushesha isiqobolo ukuze uqonde kahle unogwaja bamba uginxi waso ngesandla sakho sokunene, uphakamisa ngemuva kwayo etafuleni.
Ngesikhathi esifanayo shiya isandla sakho sobunxele phezulu ukuze uthathe intamo yanogwaja.Kufanele ubambe ikhanda phezu kwesitsha ukuze ubambe ukugeleza kwegazi kusuka ekhaleni lakhe.
Kodwa-ke, akuzona zonke izigameko eziphula imithwalo yegazi yangaphakathi kanye nokukhipha isidumbu esijuluka igazi laba onogwaja kufanele uphule umphimbo wabo.